Wararka Maanta: Axad, Apr 7 , 2013-Marxuum Shaati-guduud oo Magaalada Baydhabo lagu Aasay iyo Mas'uuliyiin Dowladda ka tirsan oo qaybgalay Aaskiisa
Maydka ayaa saakay la keenay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho halkaas oo ay kula tukadeen salaadda Janaasada xubno ka tirsan dowladda oo uu ka mid ahaa madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana markaas kaddib loo duuliyay magaalada Baydhabo.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha, Maxamuud Axmed Saleebaan, xubno ka tirsan baarlamaanka oo uu ku jiray ra’iisul wasaarihii hore ee dowladihii KMG ahaa, Cali Khaliif Galeyr iyo siyaasiyiin kale ayaa ka qaybgalay aaska iyagoo ka raacay magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya.
Marxuumka ayaa wuxuu ahaa hoggaamiyaha jabhaddii RRA; isagoo sidoo kalena xilal wasiir oo kala duwan ka qabtay xukuumadihii KMG ahaa ee dalka soo maray, wuxuuna xilligii ugu dambeysay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii KMG ahaa.
Ammaanka magaalada Baydhabo ayaa aad loo adkeeyay intii uu aasku socday, iyadoo magaalada la saaray bandow, waxaana la hakiyay socodka iyo ganacsiga degmada oo dhan.
Taliyaha booliiska gobolka Bay, Mahad Cabdiraxmaan oo bandowgan ka hadlay ayaa sheegay inuu yahay mid lagu adkeynayo ammaanka inta uu socdo aaska marxuum Shaati-guduud.
Mas’uuliyiinta dhinaca dowladda ee ka qayb-galay aaska ayaa waxaa hor-kacayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa ku dhawaaqay in garoonka diyaaradaha ee Baydhabo loo bixiyay magaca Shaati-guduud International Airport, isagoo sheegay in tallaabadan ay ka dambeysay codsi dowladda uga yimid maamulka gobolka iyo dadka deegaanka.
FG: Sawirradan waa Markii Janaasada lagula tukanayya Muqdisho.